ब्युझिँदै बिजारे चौर : RajdhaniDaily.com - ब्युझिँदै बिजारे चौर
Home अर्थ ब्युझिँदै बिजारे चौर
झाङ सैपाल हिमालसँगै हुस्सुले बिजारे टम्म ढाक्छ । क्षणभरमै हुस्सु र घामको रापले चौरसँग हुस्सु र सुर्यले लुकामारी गरेको हेर्न लायकको छ । गुन्यूचोलोमा सजिएकी युवती वनतिर र घर फर्किन लस्करबीच बिहानी र बेलुकीपख पाटनलाई रमाइलो बनाउँदोरहेछ । बिहेवारी नभए पनि यसभेगका युवतीमा गहना र चुरा लगाउने चलन रहेछ । विवाह भए÷नभएको सिउँदोको सिन्दुरबाट वा सोधेरमात्र चिनिन्छ ।
पाटनमा गाई चराउने गोठाला कोही दण्डी बियो खेलेर रमाइरहेका हुन्छन् भने कोही कर्पेदी । बालपन चौरमै बिताएकी कैयौं चेली माइत फर्किंदा बिजारेमा नबसी माइतै आउँदिनन् अरे †
वैशाख र जेठमा काफल, ऐेसेलु र चुत्रा टिप्न जानेको चौरमा ओइरो लाग्दोरहेछ । छिमेकी चामुण्डाविन्द्रासैनी नगरपालिका जम्बुकाँध लयाटीविन्द्रासैनी, चामुण्डा र विशालाबाट काफल ऐसेलु र चुत्रा खान चौरमै बास बस्दा रहेछन् । अनि, दुई दिनपछि घर फर्किन्छन् ।
वसन्त ऋतुसँग चराचुरुंगीको आवाज र चौरवरिपरि पलाएको पालुवा मनमोह बनाउँदा बिजारे चौर झनै रमणीय देखिन्छ । कोइलीको मिठो स्वरले चौरमा बसेका युवायुवती र आन्तरिक पर्यटकलाई यताउता जान मनै लाग्दैन ।
बालपन चौरमै बिताएकी कैयौं चेली माइत फर्किंदा बिजारेमा नबसी माइतै आउँदिनन् अरे !
संघीय सरकार गठनसँगै बिजारे चौरमा सडक पुगेको छ । सधैंजसो दुई–तीन घर रहेको बिजारेमा सडक पहुँचसँगै धमाधम नयाँ घर निर्माण हुन थालेका छन् । स्थानीयबासी जितबहादुर विष्ट वनभोज खानका लागि आगन्तुक चौरमै बस्ने गरेको बताउँछन् । पश्चिम दैलेखका अधिकांश विद्यालय भ्रमण बिजारे चौर हो । चिसो दिनभन्दा गर्मीमा वनभोज खान चौरमा आउँदछन् । सबैभन्दा बढी त विजयादशमी र तिहारमा भीड लाग्ने गर्दछ । बिजारेनजिकै महत्वपूर्ण मानिने धौलापडा गुफा र ठुली छहरी भएकाले पर्यटकका लागि बिजारे चौरलाई पश्चिम दैलेखको महत्वपूर्ण स्थान मानिन्छ ।
समुन्द्री सतहीबाट २३ सय उचाईमा रहेको बिजारेमा वर्षेनी दुईपटक मेला लाग्छ । ओझेलमा रहेको पर्यटकीयस्थल बिजारे पुग्न पर्यटन मन्त्रालयको पार्ट–२ कार्यक्रममार्फत ट्रयाक खोलेपछि गाउँपालिकाले वर्षेनी बिजारेको सडक निर्माणका लागि बजेट बिनियोजन गर्ने गरेको ठाटीकाँध गाउँपालिका अध्यक्ष धिरबहादुर शाही बताउँछन् ।
पर्यटकलाई बिजारे पुग्न असजिलो नहोस् भन्नका लागि सडक स्तरोन्नति गरिएको छ । बाह्रै महिना बिजारेमा यातायात पुग्छ । ठाटीकाँध गाउँपालिका–६ पाँचलामा गठित बागेश्वरी असल शासन युवा क्लबले जिल्लास्तरीय क्रिकेट आयोजना गरी प्रचारप्रसार गरेको थियो । क्लब अध्यक्ष भक्तबहादुर रोकायले धेरैजसो खेलाडीले चौरको रौनकतामा रमाएको स्मरण गरे ।
दैलेखमा रहेका दुईमध्ये द्वारी झरना क्षेत्र १ सदरमुकामबाट ७ कोष टाढा र ठुली छहरी झरना चौरबाट एक किलोमिटर खोचमा रहेको छ । झरनानजिकै धौलापडा गुफा पनि छ । दैलेखको एकमात्र मदानताल पुग्न चौरबाट तीन घण्टा पैदल लाग्छ भने नागे गुफा, बेहुली लेक, तिनचुलेजस्ता सेता हिमालले चौर हेरिरहेजस्तो लाग्छ ।
करिब ३ घण्टा दूरीमा चामुण्डाविन्द्रासैनी नगरपालिका –३ स्थित जलगुफा छ । करिब २५ मिटर लामो गुफाभित्र संरक्षण अभावले राम, हात्ती, शिवपार्वती जनावरलगायतका मूर्ति चोरी हराएका छन् । केही समयअघि देखिएका केही मूर्तिसमेत चोरी भइसकेका छन् ।
कर्णाली राजमार्गबाट दायाँ रामघाट सिगासैन सडक खण्डको १९ किलोमिटरमा बिजारे चौर पर्छ । नजिकैको ठुली छहरीबाट २० मिनेट उकालोपछि चौर भेटिन्छ ।
दैलेखका पर्यटकीयस्थलमा रहेका पञ्चदेवल मूर्ति, बेलासपुर मन्दिर, शिरस्थान, कोटिला, नाभीस्थान, पादुका मन्दिर, नेपाली भाषाको पहिलो शिलालेख रहेको दुल्लु, पाथरनाउली र पौवा चिनाए पनि पश्चिम दैलेख ठाटीकाँध गाउँपालिकामा रहेको मैदान ताल, चामुण्डाविन्द्रासैनी नगरपालिका –३ मा रहेको जलगुफा, धौलापडा गुफा, ठुली छहरी झरना, लकान्द्रको बिजारचौर र भिमपाइला भने गुमनाम छन् ।
प्रदेश ३ राजधानी समाचारदाता - February 26, 2021 0
अव्यवस्थित राजधानी र बागमतीको व्यथा
डा. देवीप्रसाद आचार्य - December 9, 2020 0
बागमती नदी सरसफाइ गर्न सुरु गरेको ४ सय साता भयो । ४ सय साताको समय भनेको लामो अवधि हो । यस अवधिमा बागमती सरसफाइ...
Editor-Picks कौशिला कुँवर - May 7, 2020 0
नेकपा विवाद समाधानतर्फ
Breaking News राजधानी समाचारदाता - December 16, 2020 0
काठमाडौँ । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्षद्वयको सहमतिका आधारमा स्थायी कमिटीको बैठक चल्न थालेपछि पार्टीभित्रको अन्तरविरोध निकासतर्फ उन्मुख देखिएको छ । पार्टी...
प्रदेश राजधानी समाचारदाता - March 4, 2020 0
प्रदेश २ सुजीतकुमार झा - February 29, 2020 0
बलिउडमा नातावाद भएको आमिरको कथन
Not-to-be-missed एजेन्सी - July 31, 2020 0
मुम्बई । तीन वर्षअघि आफूले दिएको अन्तर्वार्ता भाइरल भएपछि बलिउडमा अभिनेता आमिर खानले पुरानै भनाइलाई समर्थन जनाएका छन् । आमिरले तीन वर्षअघि एक टेलिभिजन अन्तर्वार्ताका...